Umhla My Pet » 7 Ideas ngokupheleleyo Unique Kuba Usuku
ngokuthi Julie Ritchie
7 Ideas ngokupheleleyo Unique Kuba Usuku
ukubuyekezwa: Oct. 20 2020 | 3 min ukufunda
Dating, sonke ehlelwa imihla elungileyo, ezinye / abo woyikekayo buthuntu, abanye kuhanahanisa iyoyikeka bafanelwe abo kwaye ngethemba ezinye / abo umdla Imnandi kakhulu. Ngoko ke yintoni eyenza umhla emangalisayo? Kunjalo umntu sihlangene inokuninzi yakwenza nayo, Noko ndicinga ukuba kukho okungakumbi ukuba. Ndicinga into njani ukuba ngokwenene ukwenza umhla ume ngaphandle ke ekwabelwana amava ukuba kunye, kwaye uxhulumaniso oku kuzisa.
Ukuhlanganisana bar okanye pub kuba ngomhla wokuqala yemihla kakhulu kwaye ngelixa ukuba isidlo intle, enokufikelela yindinisa xa usenza oko veki nganye ukuze umhla ebusuku neqabane lakho. Nokuba ngomhla wokuqala okanye ngeveki 'umhla ebusuku' rhoqo ngokwenene ujiye ukuya ngokuthi abakhetha into ezonwabisayo izandla.
Ngaba ubusazi ukuba amava ukwenza uqhagamshelwano phakathi kwabantu? Isebenza njengalo. Xa ngaba unayo nayiphi na uhlobo amava Kwakhona uya kuba iimvakalelo ezihamba kunye nayo. Ngoko ke umzekelo, ukuba abseil esiphelweni mhlawumbi uya kubona eminye ukuphakuzela, mhlawumbi unkwantyo, Izibilini kunye eliphezulu. Ngoku xa kukho amava ekwabelwana nomnye umntu, kwaye siza kusetyenziswa iimvakalelo ezifanayo kunye, oku kudala ngokuzikhanyeza. Kuba into enye singazidibanisa omnye komnye yaye nento ukuthetha, kunjalo namabhinqa kukho isizathu elingqalileyo. Xa abafazi ekwabelwana (kulungile okanye umdla) ngamava nomntu umchiza ebizwa yioxytocin nalo yakhutshwa imizimba yethu. Olu hormone ubuhlobo kuya kusenza sizive sisondele ngulomntu kuvakaliswa amava kunye. Ngoku isibini ukuba iadrenaline ezinye ekwenzeni into umdla, abanye iiendorphin kunye serotonin ekwenzeni into fun, kwaye oko umxube intle izityhuthutyhuthu. Xa ujonga kuyo ngale ndlela kulula ukubona indlela thina kuwa ngenxa umntu uthandana.
Ngoko njani isicelo oku ingqikelelo ukuthandana? lula, ufuna ukucwangcisa imihla yokuba ukwenza ukuba amava ekwabelwana kwaye ziquka bezonwabisa element umdla. Iindaba ezimnandi kukuba eqhelekileyo, abantu ngemihla abo ukuthatha Jonga-ilazi banakho ukwenza ezi uhlobo amava. Aze anike lo ube ngohlangothi phezu okhuphisana. inamandla kwaye linomtsalane ukuba bakwazi ukwenza olu uhlobo yamava, noko yindlela kakhulu inqaba umtsalane. Xa siziva iimvakalelo ophakamileyo ulwalamano kunye nomnye umntu otsaleleke kwabo.
Enye inzuzo ngokukhetha into eyodwa yaye kumnandi umhla wakho ukuba ndimaphule umkhenkce, nto leyo ibaluleke kakhulu xa nto ngomhla wokuqala. Xa sisebenza ukuba ukupheka ipizza kunye awunalo ixesha elininzi azive kunzi-. Kwaye nga vumela amathuba bokufumana ngokwasemzimbeni flirty omnye nomnye. Yinto kudla nzima ukuba angamchukumisi umntu ngenkankulu ukuba xa ngomhla ebharini, Kodwa xa usenza into eluncedo kunye kube lula kakhulu. Ukuba kufuneka sisebenze kunye umsebenzi oko kunto ngcono, khumbula ukuba ngamava ekwabelwana kudala uxhulumaniso. Ukuba umsebenzi wakho lulonwabo kwaye ufumane nina nihlekayo oku kuya kukunceda zombini lokuphumla.
Nazi ezinye izimvo kuwe:
Ukupheka kunye - Ukupheka kunye inokuba wonwabe kakhulu. Ungakhankanya noba ukubhukisha isifundo zokupheka okanye ukupheka into ekhaya (bukho akukho ngomhla wokuqala).
zodongwe - Kwakhona eli izandla ukhetho kwaye kunokuba sexy kakhulu. Cinga ifilimu 'Moya'. Yaye inxalenye enkulu na ukuba kuya kubakho keepsake ukususela kumhla ngohlobo ezenziwe kukufunayo. ukwenza nje ukuba umhla wakho uyazi ukuba banxibe iimpahla ezindala.
Ukuhamba kunye imbonakalo ezinkulu - Siye wathetha ngokudala ngamava ekwabelwana Ukuba awunalo ixesha okanye wena kwi mali uhambahambe kunye kunokuba asenokungakulungeli. Abantu badla bakufumanisa kulula ukuyekelela bathethe xa behamba. Yaye ukuba ukhetha ndaweni ukuba unalo imbonakalo intle oku kongeza amava. Enye imihla ilungileyo kwezakha yaliqinisa amakhowa zasendle kwihlathi. Ngethamsanqa mntu nda ukuthandana bendisazi apho abo atyiwayo!
Into nobuganga ezifana Ukwehla okanye zorbing - Kuba Junkies iadrenaline oku igqibelele. Nje qinisekisa ukuba umhla wakho uyazi ukuba uceba into kwaye ngenxa phambi kokuba uye!
Yiya zoo - Nantoni na izilwanyana mkhulu. Evuselel izilwanyana Unokuwuqhawula yothani yakho kwaye axa evuselel omnye komnye. Plus kuyanceda ukukhulula ukuba yincindi yonke ebalulekileyo yioxytocin.
Ukukhwela ihashe - Ngokukhwel kwenene ku kuhlekwe, kananjalo mngeni xa ungafumenanga wazama phambi. Kwakhona nje khangela iqabane lakho ukuze umngeni phambi kokuba uye njengoko ingengabo bonke.
Art mboniso - Ukuba zombini Wafanekiswa oku kungenza ukuba amava nesiphucukileyo namnandi ekwabelwana. imiboniso Ifoto kuba luyolo kakhulu.
7 Inyaniso Malunga Pet Lovers
Indlela Uthando Njani naxhala nina engxakini?
6 Tips ukuba ndingagxothwa Umhla First Zokuba Last wakho
Ngomhla kujuba – Ngaba ukuthandana online indlela ekunene ukuya?
6 Imibuzo Izibini Ukuba Cinga Ngaphambi kokuba ufumane Pet